Madaxda maamul goboleedyada oo wadajir u soo saaray War-saxaafadeed. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxda maamul goboleedyada oo wadajir u soo saaray War-saxaafadeed.
Allhadaaftimo July 6, 2020 July 6, 2020 Uncategorized
Madaxda maamul goboleedyada ayaa goordhow War-Murtiyeed ka soo saaray shir dhinaca tilifoonka ahaa oo xalay ay yeesheen.
Shirka oo ay ka qeyb galeen madaxweynayaasha maamulada Hirshabelle, Koofur Galbeed, Galmudug, Jubaland iyo Puntland, ayaa diirada lagu saaray sidii loo dar dar galin lahaa qabsoomida kulan looga hadlo xaalada guud ee dalka.
Madaxweynayaasha waxa ay isla qaateen in 9-ka bishan oo ku beegan maalinimada Khamiista ah ay Dhuusa-Mareeb ku yeeshaan shirka, kaasoo ay ku faaqidi doonaan wixii loola tagi lahaa shir weynaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Shirka dowladda iyo maamul goboleedyada oo madaxweyne Farmaajo hore u iclaamiyay inuu qabsoomayo 5-ta bisha oo shalay ku beegneyd ayaa baaqday, iyadoo Villa Somaliya ku fashilantay isu keenida madaxda goboladada.
Previous Kulan oo ku saabsan sida dumarku ay uga qayb qaadan lahaayeen maaraynta arimaha bini-aadantinimada .
Next Gudoomiyaha Cusub ee Sanaag oo Beeniyay Inuu Diiday Inuu Tago Gobolkaasi.